Sangano reThe National Age Network of Zimbabwe Rocherechedza Zuva reHutano Richitarisa Hutano hweVakwegura
Sangano reThe National Age Network of Zimbabwe, iro rinoshanda nevakwegura.
Sangano rinoona nezvekukwegura kwevanhu munyika, reNational Age Network Zimbabwe, nhasi riri kucherechedza zuva rehutano pasi rose, reWorld Health Day.
Zuva iri rinocherechedzwa musi wa7 Kubvumbi pasi rose, asi sangano iri rakasarudza kuricherechedza musi wa 13 Kubvumbi, kumahofisi esangano reWorld Health Organisation, WHO, ari kuNewlands, muHarare.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri, VaMarck Chikanza, vanoti vachatorawo mukana wekucherechedza zuva iri vachiparurawo gwaro rakanangana nehutano hwevanhu vakwegura, uye kupemberera kusvitsa makore makumi manomwe kwesangano reWorld Health Organisation.
Vanoti gwaro ravachaparura iri rakabuda mushure mekushanda kwavakaita pasi pechirongwa chinonzi “Better Health for Older People in Africa” munyika ina dzinoti Zimbabwe, Mozambique, Ethiopia, neTanzania.
“Shure kwekudarozvo, takabva taona zvakakosha izvo kuti tiite iyo inonzi National Health and Aging Strategy. Muno muZimbabwe takaiti National Health Aging Strategy,” Vanodaro VaChikanza.
Vanoti vakaronga kutandadza vanhu nemitambo yakasiyanasiyana, inosanganisira mhanzi kubva Salvation Army Band.
VaChikanza vanotiwo vakakoka vanhu vakawanda, masangano akazvimirira, pamwe nemapoka ehurumende kumhemberero dzavo idzi.
Sangano reNational Age Network of Zimbabwe, mubatanidzwa wemasangano akazvimirira anokwana kuita gumi nemaviri, uye mubatanidzwa uyu wakaumbwa muna 2012 uchitarisa mararamiro nemashandiro aiita vanhu vakwegura, zvikuru mumapurazi.
Mubatanidzwa uyu unoshandawo zvakare nemapoka maviri ehurumende, anoti rinoona nezvezvirwere zvisingatapuriranwe, riri pasi pebazi rezvehutano, pamwe neboka rezvekurima, reAgritex, iro riri pasi pebazi rezvekurima.
Hurukuro naVaMarck Chikanza